Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ဆုတောင်းကန်တော့ကျေးဇူးတင်လွှာ
Writer Sein Lyan Time 12:56 pm
ကောင်းတာလုပ်လို့ ကောင်းတာပြန်ရတယ် ပဲ သဘောထားပါလေ
မင်းပြောပြောနေတဲ့ ယုံတဲ့ ကံပေါ့
ကန်တော့ တာတော့ မကောင်းဘူး ကိုယ့်ကိုပြောတာ
ကိုယ်က အဲတာတွေလဲမယုံတော့ ကေပါတယ်
သာဓုပါကွယ် သာဓု သာဓု.. ငှီးငှီး.. ။ ကန်တော့နော်.. ပြေမှားဆိုမှားရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ..။
သားသားလည်းပါဘူး... .(နောက်တာ.. :-) )
သူ့ကျေးဇူးတွေကို မှတ်ထားတာ ကောင်းတဲ့ စိတ်ထားပါ... အငယ်တွေကလည်း ကိုဖိုးစိန်ကို ကန်တော့လိုက်ပါတယ်... :P
မောင်လေးဖိုးစိန်ရေ.... နှစ်သစ်မှာ ပထမဦးဆုံးကြားရတဲ့ ကျေးဇူးတင်လွှာနဲ့အတူ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ဓလေးထုံးစံလေးအရ အခုလို ဂါရ၀ ထားပြီး ခင်မင်လေးစားတဲ့ အတွက် အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာကြည်နူးမိပါတယ်။
နှစ်သစ်မင်္ဂလာမှာ မကြီးရေဆိုပြီး အမြဲတမ်းနှုတ်ဆက်တတ်တဲ့ မောင်လေးရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေ အမြန်ဆုံး တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ပြည့်စုံနိုင်ပါစေ။ မိဘရဲ့ကျေးဇူးကို သိတတ်ပြီး လိမ္မာတဲ့သောင်းကောင်း ရတနာ တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါစေ။ ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀ တစ်ထပ်တည်းကျပြီး တိုးတက်အောင်မြင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကိုဖိုးစိန်ရေ.. အကို လုပ်နေတာထက်စာရင် မပင်ပန်းပါဘူးဗျာ။ ဟီး..
မောင်လေးဖိုးချိန်ကို ချစ်တဲ့သူတွေ အများသားကိုး။ ဟုတ်ပါ့နော် ဘလော့ဂ်သံယောဇဉ်တွေက ကြည်နူးမိပါတယ်။ အစ်မက သဘောကျရင်း ပြုံးပြုံးလေးလုပ်ပြီး ဖတ်လာတာ အောက်ဆုံးမှ အစ်မကို ကန်တော့စာရင်းထည့်ထားတာတော့ လန့်သွားတယ်။ ဟိဟိ။ ခင်လို့ စတာပါ။
အစ်မတို့စာဖတ်သူဖက်ကလည်း ပြောမှားဆိုမှားရှိရင် ဒီအတာသင်္ကြန်နဲ့အတူ ခွင့်လွှတ်ပါနော်။
ဆိုက်ပရပ်သင်္ကြန်ဖျော်ဖြေပွဲလည်း အစစအရာရာ အဆင်ပြေပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်အမှတ်တရပွဲလေး ဖြစ်ပါစေ။ ဓါတ်ပုံတွေလည်း မျှော်နေမယ်ဝေ့။
အယ် အနော်လည်းပါဘူး.. အစကတည်းက အခုလို ရေးမယ်မှန်း သိ၇င် ကူညီပါတယ်... အဟိ... မေးလ်ကနေ ပို့ပေးလိုက်တဲ့ ဟာလေးလည်း ကျေးဇူးတင်စကား ပြောဦးလေ
:) ကန်တော့ တယ်ဆိုတော့ အားနာလိုက်တာ။ ငါက နင့်ထက် သုံးလေးလပဲကြီးတာကို။ ဘာပြောပြော ကန်တော့ခံလိုက်ပြီမို့ ဆုပေးမယ်။
စိတ်ချမ်းသာ ကျန်းမာပါစေ။ လိုရာဆန္ဒတလုံးတ၀တည်းပြည့်ပါစေ။ သားတရာမြေးတကျိပ်ထိ.သက်ရာကျော်ရှည်ပါစေသော်ဝ်။။
အဲ..ငါလဲ နင့်ကို ပြန်ကန်တော့တယ်နော်။ ပြောမှားဆိုမှားရှိရင် ခွင့်လွှတ်။ စတာနောက်တာနော်။
သြော်သားသားလေး မောင်ဖိုးစိန်လား... သားသားလေးက အခုလို လူကြီးသူမကို ရိုသေတယ်ဆိုတော့... အင်း.. သာဓုခေါ်ပါတယ်ကွယ်.. သာဓုခေါ်ရမှာပေါ့ .. ကွဲ့ နော်...
credit ပေးတာ မှားနေတယ် credit တွေ က မောင်ငယ့် ကိုပေးရမှာ သီချင်းတွေ အကုန်လုံးက သူလုပ်ပေးတာပါ
ကိုယ်က ကြားက အကူအညီတောင်းရုံတင်
အယ် အကိုကလည်း ပြောတော့မယ် ညီက အကိုထက်စာရင်မပြောပလောက်ဘူးလေ အကိုမှညီလုပ်ချင်တာ သိချင်တာကို ပြောပြနေတာကို အလှဲအလှယ်လုပ်တယ်သဘောထား အဟိ ဝမ်းသာလိုက်တာ အကိုရာ ချစ်ယောက်ဖအိုက်ခီ ဆိုတော့ အဟိ အကိုကညီကို အဲ့လောက်ချစ်တာကိုးနော့ ညီလည်းအကို ကိုအပြင်မှာမတွေ့ ဖူးပေ့မယ့် တစ်အားခင်နေတာ မမြင်ရတဲ့သံယောဇဉ် လိုပဲ ဗျ အကို ပွဲအောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
သာဓုပါဗျာ ကန်တော့အထဲ ကျနော်မပါပေမဲ့
သာဓုခေါ်သွားပါတယ်။ ကန်တော့တောင်းပန်တာဆိုတော့ ကြည့်ရတာ
မဟုတ်တာ လုပ်တော့မယ်နဲ့တူတယ်။ ဟီဟီ
နောက်တာနော် ထင်လဲ ထင်ပါဘူး။ကောင်လေး
သာဓုပါကွယ်.. ငါ့တူကြီး ကျန်းမာချမ်းသာလို့ လိုအင်ဆန္ဒ တစ်လုံးတဝ ပြည့်စုံပါစေကွယ်...
ငါ့တူကြီး ရောက်လေရာ အရပ်မှာ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ..
ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေသော ကောင်မလေးများ၏ ဂရုစိုက်ခြင်းကိုလည်း ယခုထက် ပို၍ ရရှိနိုင်ပါစေကွယ်...
စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါ စိတ်ကူးမိရာ အကုန်ဖြစ်ပါစေကွယ်...
မုန့်ဖိုးကတော့ ကြိုက်သလောက်ပြောကွာ.. ပို့ပေးလိုက်မယ်..
(လူကြီးလေးသံနဲ့ ဆုတွေပေးသွားတယ်)း)
ဒါလေး လုပ်ပေးပါဆိုလို့ လုပ်ပေးလိုက်တာ..။
အကိုရေ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ
စိတ်၏ ကျန်းမာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ
17 April 2009 at 05:18
အစ်ကို ဖိုးစိန်ရေ ... နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုပေါင်းများစွာနဲ့ မိဘကို အစဉ်ထာဝရ ပြုစုစောင့်ရှောက် လုပ်ကျွေးနိုင်တဲ့ သားကောင်း သားလိမ္မာတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ် ... စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနဲ့လည်း ပြည့်စုံပါစေဗျာ .. ကိုဖိုးစိန်လို စိတ်ရင်းစေတနာ ကောင်းမွန်ပြီး သဘောထားပြည့်ဝတဲ့ လူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ဒီလို သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကောင်းတွေ ရှိနေတာ မဆန်းပါဘူးဗျာ ... ကို ဖိုးစိန် ကိုယ်စား ဂုဏ်ယူပါတယ် .. ဝမ်းသာပါတယ် ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မိပါတယ် ... ဆထက် တစ်ပိုးအောင်မြင်ပါစေ ဗျာ ။။။
ကိုဖိုးစိန်လေးက ဒီလိုတော့လည်းလူကြီးသူမ သိတတ်သား ။ဒါကြောင့်လူချစ်လူခင်များတာ ထင်ပ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အမလည်း ကန်တော့ခံ လူတန်းစားထဲ ပါဝင်သွားပြီဆိုတော့ သိပ်ပြီးပေါလို့ မကောင်းတော့ဘူးပေါု့ ။ ဟိဟိ ။ဒီလိုသိတတ်တာ သာဓုပါကွယ် ။ မင်းရှေ့ လျှောက်ကြီးပွားအုံးမယ် ..
ဟောဗျာ.. ဖိုးစိန်လေးကို ၀ိုင်းချစ်ကြတယ်လားးးး
တွေ့လား ဘလော့ဂါ မောင်နှမတွေ ဘယ်လောက်သဘောကောင်းလဲနော်...း)
သာဓုပါ ဖိုးစိန်လေးရယ်... အစ်မနေမကောင်းနေ..
တခါတလေ ကိုယ့်အိမ်တော့လာလည်ကြပြီး ကိုယ်က
အစ်မကြီးတွေကို ကန်တော့တဲ့ မောင်လေး ဖိုးစိန်တစ်
ယောက် ဘ၀မှာ အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးနဲ့ ပျော်ရွှင်
အစ်မလည်း မနော်လိုပဲ အကောင့်ထဲကနေလွှဲပေးလိုက်
တယ်နော်.. အကောင့်နံပါတ်ပေး... ပြီးရင် စီးကရက်
နံပါတ်ပါပေးခဲ့... ပိုက်ဆံလိုရင် ထုတ်သုံးမလို့လေ.ဟဟ
...စတာပါကွယ်.. နှစ်သစ်နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ပါစေ.
အစ်မတို့ မနက်ဖြန် ခရီးထွက်ကြမယ်. တာ့တာနော်.
So clever, so cute, so polite.
နှစ်သစ်မှာ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ
စိတ်ကောင်းရှိမှန်းသိလို့ တကယ့်ကို ခင်မင်မိပါတယ်
ကိုဖိုးစိန်ကို ဆရာလုပ်တာ မဟုတ်တဲ့ အကြံလေး တခုလောက်ပေးချင်တယ်။ စာရိုက်တဲ့အခါ Space လေး ခြားပြီး ရိုက်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ စာကြောင်းတွေ ပြွတ်သိပ်နေတဲ့ ရန်ကလဲ ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်သလို ဖတ်ရတာလဲ ပိုအဆင်ပြေသွားမလားလို့ပါ။
တော်တော်ကို စုံသ္ဂားတာ နာမည်ကြီး Blogger တ္ဂေအားလုံးပဲ။
c box မတ္ဂေ့မိပါလား ခင်ဗျာ။
19 April 2009 at 02:34
မိကောင်းဖခင်သားသမီး ပီသသော ဖိုးစိန်လေး
ကြည်နူးဝမ်းမြောက်မိပါကြောင့်း့့ 
ဒီနှစ်သစ်ကစလို့ နောင်နှစ်သစ်ပေါင်းများစွာကို စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ... ခုမှတွေ့မိလို့ ဆုပေးတာနောက်ကျသွားတယ် မောင်လေးဖိုးစိန်ရေ။ ပျောက်ပျောက်နေတတ်တဲ့ အစ်မကို သတိတရရှိတာ တကယ်ကို ကျေးဇူးတင် ဝမ်းသာမိပါတယ် (မုန့်ဖိုးကို နောက်တွေ့ရင်ပေးမယ်နော်း))